Meitu foto ngwa na-eziga IMEI na ndị ọzọ na adreesị IP mpụga | Gam akporosis
Popular foto ngwa Meitu na-eziga adreesị MAC, IMEI na ndị ọzọ na sava ndị dịpụrụ adịpụ
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Foto, Noticias
na ikikere anyị na-enye ngwa Ha na-enyekarị ike dị iche iche na oge ụfọdụ anyị anaghị amata ihe si na ha pụta. Ikwe ka ngwa jiri oku ekwentị na-egosi na ọ nwekwara ohere ịnweta ozi dị mkpa dịka IMEI. Ọ bụ ya mere anyị ji eji arụmụka arụ ọrụ mgbe ha jụrụ anyị maka ikike dị iche iche, ọ bụ ezie na ịnwe micropayments mgbe ụfọdụ na-emegharị anyị anya.
Meitu bụ ngwa foto ndị China na-emetụta ihe nzacha na nkwalite dị iche iche na onyonyo anyị chọrọ. Ọ bụ n'ime awa ikpeazụ mgbe ọ bịara n'ihu mgbe amaara na ngwa ahụ na-eziga oke ego Njirimara nkọwa na mpụga IP adreesị. Nnọọ ihe ijuanya maka ngwa nke nwere ọtụtụ ewu ewu na nke a na-atụ aro ka ewepụ ya.
Dịka m kwuru, mgbe ị na-eji ngwaọrụ gam akporo, a na-atụ aro ya ka ị lelee ikikere ndị a ga-enye. Anyị nwere ike ịjụ ịme nke ahụ wee malite ngwa ahụ. Ihe ngosi nke Meitu APK na-ajụ ikikere iri abụọ na atọtinyere nnweta zuru ezu na netwọk, ikike ịgbanwe ntọala, ebe dị mma, adreesị MAC, IP mpaghara, na ndị ọzọ.
@IGIHE Enwere m obi abụọ ma chee ihe!
- AnọOctets (@Ofofo) January 19, 2017
Ọ bụ onye ọrụ Twitter @ rekrom12 bụ onye hụrụ MTAnalyticsAdLogEntity.java n'ime APK nke nwere koodu maka ihe niile nkọwa na-zitere banyere ngwaọrụ. Nke ahụ gụnyere ụdị ngwaọrụ, mkpebi, ụdị gam akporo, adreesị MAC, IMEI na ndị ọzọ.
Ndị a bụ ikikere niile:
Onye ọrụ ọzọ, @FourOctets, gbochiri ọrụ netwọkụ nke ngwà ahụ, ọ dịkwala agbakwunyere ọtụtụ adreesị IP nke China. Yabụ na ọ dịịrị gị ịwụnye ngwa a nke nwere ike ịgụnye ụfọdụ ihe ịtụnanya ga-eme n'ọdịnihu, n'agbanyeghị na n'oge ọ na-eziga data dịka IMEI na adreesị IP na mba ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Popular foto ngwa Meitu na-eziga adreesị MAC, IMEI na ndị ọzọ na sava ndị dịpụrụ adịpụ
Kedu ihe nke a pụtara?
Ndị a bụ ụbọchị nke mmelite Nougat maka ụdị Huawei na China